Fanandramana ny seminera momba ny fanamarinana ny Marketing
Ny tetika ara-barotra dia ilaina foana. Impiry izahay no nandre fa "maty i SEO?" An'arivony imbetsaka. Na izany aza, tsy vita ny fampiroboroboana ny SEO, mitohy manova zavatra hafa izy io.
Amin'izao fotoana izao, ny SEO dia mifamatotra amin'ny sehatry ny marketing - la fiesta casino bonus. Raha manao izany ianao dia tokony ho izany no izy. Ny varotra Content dia nahavita nanangana ny marika ho toy ny iray amin'ireo manan-danja ao amin'ny tranonkala marketing. Raha azonao atao ny manaitra ny votoatin'ny varotra amin'ny fitaovana maoderina, manan-danja, ary manan-danja, dia haka ny valisoa ianao amin'ny endrika fampitomboana ny varotra, ny vidin'ny marika, ary amin'ny farany, fiverenana goavana amin'ny fampiasam-bola.
Nik Chaykovskiy, mpitantana ny Success Suisse amin'ny Semalt , manazava ny fomba hahatonga ny ankamaroan'ny tetikady ara-barotra amin'ny sehatra ho an'ny orinasanao.
Ahoana no hamaritana raha tsapanao ny tombontsoa?
Amin'ny farany dia misy fiantraikany goavana sy fitomboan'ny vokatra azo avy amin'ny fifamoivoizana amin'ny fitomboan'ny fifanakalozan-dresaka, izay mitarika ho amin'ny tombony azo antoka..Ity no tanjona faratampony. Izany no mahatonga azy ho sarobidy.
Saingy rehefa mifantoka amin'ny mihoatra ny paik'adiny isika dia mety tsy hodinihina ireo tranga izay tena ilaina. Amin'ny teny hafa, ahoana no ahafahanao manombantombana ny mombamomba ny votoatinao sy ny ifandraisanao aminy dia miverina amin'ny fampiasam-bola?
Fanamafisana ny fitomboana
Rehefa mandinika ny ROI momba ny varotra ianao, dia tsy maintsy manontany tena ianao hoe inona ny tanjon'ny orinasa ary inona no andrasanao hanatratrarana ilay fampielezan-kevitra. Ny valin-kafatrao amin'izany dia hampahafantatra ny mikajy izay ianteheranao. Ny sasany amin'ireo fampahalalana ireo dia mety ho mora entina; Ny fampahalalana hafa dia mety ho sarotra ary manome ny fahatsapana mazava momba ny fahombiazan'ny votoaty.
Raha momba ny marketing-vontoatin'ny votoaty, dia misy ny sasany amin'ireo fitaratra tokony hodinihinao:
Aoka ianao hirotsaka amin'ny fiantraikan'ny fandaniana ara-barotra amin'ny orinasa.
Diniho ny vola laninao rehefa manaparitaka ny votoatinao.
Nitombo ny fidiram-bola
Ny fampitomboana ny tombombarotra dia mametraka ny fototra izay hanombohanao ny fitohizan'ny fidiram-pandraisanao mivantana.
Manaova horonam-peo sy fotoana laniana amin'ny tranonkala
Ny famaritana ireo fenitra roa ireo dia manome fahatakarana ny famakiana ny votoatin'ny mpihaino anao.
Ahoana no hampitahana azy amin'ny Google Adwords?
Azonao atao ny manamarina ny renivohitra azonao ampiasaina amin'ny marketing-votoatin'ny votoatiny amin'ny fijerena ny vidin'ny soritr'aretina atao amin'ny Google Adwords.
Miaraka amin'izany, dia tadidio fa ny votoaty dia tokony ho fenoina amin'ny teny fototra izay mitondra anao ny fitarihana betsaka indrindra.
Korrelation eo amin'ny fotoana fividianana sy ny fifandraisana voalohany
Manamafy ny faharetan'ny mpanjifa mahazatra mba hividianana avy amin'ny fotoana ahafahany mijery ny votoatiny manome ny mombamomba ny fahombiazan'ny tetikady ara-barotra.
Ny fanamafisana io fanampiana io dia ny hahalalanao ny maha-zava-dehibe ny fitaovana tsara indrindra amin'ny haino aman-jery sosialy.
Dihy fifampiraharahan'ny mpihaino
Tokony handinihanao ny isan'ireo rakitra, bits, klioketsa, ary fandefasana azy ireo hatramin'ny nanehoana ny fahombiazan'ny dinidinika momba ny varotra.
Tokony hanaraka ny fotoana lanin'ny mpihaino anao mamaky lahatsoratra manokana ianao.
Ny famaritana izay votoatin'ny fanentanana ny mpihaino dia mametraka ny habetsaky ny paikady momba ny varotra.
Tokony hamaritra ny fiainanao ny fiainanao amin'ny alàlan'ny fametahana, ny fomba fijery ary ny fanamarihana.
Ary mazava ho azy, mandinika ny fandraisana anjaran'ny olona sy ny fiarahamonina ara-tsosialy araka ny filazan'ny media sosialy. Ireo fotodrafitrasa voalaza etsy ambony dia tena ilaina amin'ny famaritana ny fifamoivoizana, ny buzz, ary ny fiantraikan'ny votoaty.